समाचार - फोहोर होइन, हैन: कति प्याकेजि waste फोहोर धेरै छ?
कागज प्लास्टिक झोला
कागज कफी कप
मकै स्टार्च उत्पादन
कागज PLA उत्पादन
फोहोर होइन, हैन: कति प्याकेजि waste फोहर धेरै छ?
प्याकेजिaआवश्यक छ: यसलाई बिना विश्व कल्पना गर्नुहोस्।
त्यहाँ सँधै केही प्रकारको प्याकेजि been्ग आएको छ र त्यहाँ सँधै हुनेछ, तर के त्यहाँ जीवनको यी आवश्यकताहरूबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण र फोहोरको मात्रा बन्द गर्नका लागि केहि उपाय छ? हाम्रो जीवनमा प्याकेजिंग फोहोरको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्न हामी सहमत हुने रेखा कहाँ लिन्छौं?
सबै भन्दा बढता प्याकेजि materials सामग्री स्ट्रेच र्याप हो जुन उत्पादनको लागि अत्यधिक विषाक्त हुन सक्छ। यो पनि धेरै टिकाऊ हो जसले यसलाई पुन: साइकल गरेन भने विघटन गर्न गाह्रो बनाउँदछ। र, सत्य यो हो कि सबै कम्पनीहरूले रीसायकल गर्दैनन्, तिनीहरूको प्याकेजिंग फोहोर तेस्रो पार्टी कम्पनीहरूले मिल्काउनुको सट्टा। के हुन्छ यदि यी बढि उत्पादकहरू र वितरकहरूले आफ्नो प्लास्टिक, कागज, र कार्डबोर्ड रिसाइकल गर्न सुरू गरे? तिनीहरूले केवल पैसा बचत गर्दैनन्, पर्यावरणलाई खतरनाक प्रदूषकहरूबाट बचाउन पनि मद्दत गर्दछन्।
वा हुन सक्छ कि तिनीहरूले स्ट्रेच र्याप र अन्य प्याकेजिंग सामग्रीको लागि विकल्प फेला पार्न सक्नेछन् जसले सबैभन्दा अधिक फोहोर उत्पन्न गर्दछ। एक सम्भाव्य विकल्प प्यालेटिज्ड चिप्स हुन सक्छ जुन प्यालेटहरूमा भण्डार हुँदा उत्पादनहरूको स्लाइडिंग रोक्दछ। यी Adhesives केहि स्ट्रेच र्याप भन्दा सस्ता हुन सक्छ। तिनीहरू उत्पादन गर्न कम प्रदूषण पनि उत्पादन गर्न सक्दछन्। पुन: प्रयोज्य बन्जी कर्डले स्ट्रेच र्याप प्रतिस्थापन गर्न ट्रिक पनि गर्न सक्दछ जबकि अझै स्थानमा उत्पादनहरू समात्दै। त्यहाँ केहि फोमहरू छन् जुन ओसिलो छ। यो वातावरण को लागी राम्रो छ, तर शायद शिपिंग वा भण्डारण को लागी आदर्श छैन।
तपाईको प्याकेजि waste बर्बादलाई रिसाइकल गर्ने जस्तो पर्यावरण मैत्री लाग्न सक्छ, यो पूर्ण रूपमा हरियो छैन। कागज र कार्डबोर्डलाई रिसायकल गर्नका लागि कागजहरू पानीसँग मिसाइन्छ र पदार्थको रूपमा यसको बनाउने वस्तु बनाउँदछन्। यसले फाइबरहरूलाई कमजोर बनाउँछ त्यसैले पुनर्चक्रित सामग्रीहरू कडा बनाउन, काठ चिप्स पल्प मिक्समा थप रसायनहरूसँग जोडिन्छ जसले अशुद्धताहरू हटाउँदछ।
यदि तपाईं आफ्नो प्याकेजि material सामग्री रिसायकल गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने, बायोडिग्रेडेबल सामग्री खरीद गर्न कोशिस गर्नुहोस् ताकि जब यो टाढा फ्याँकिन्छ भने सजिलै विघटन गर्न सकिन्छ वा धेरै पटक पुन: प्रयोग गर्न सकिने उत्पादनहरू फेला पार्न सक्दछ, जस्तै एयरब्यागहरू र प्याकेजि pe बदाम। प्याकेजिंग फोहोर घटाउने कम्पनीहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्छ जसले यसको धेरै उत्पादन गर्छ। कहिलेकाँही यो समय खपत र कष्टकर हुन सक्छ, तर अन्तमा, मातृ प्रकृतिले तपाईंलाई धन्यवाद दिनेछ।
ठेगाना: न। 5०5१, शेng्गली पूर्वी Str, कुईवेन जिल्ला, वेफाang शहर, शेन्डong्ग प्रो, चीन
प्याकेजिंग आपूर्ति मार्केट द्वारा हावी ...
फोहोर छैन, हैन: कति प्याकेजिंग w ...